I-Kdenlive 20.04.1 ngoku ilungisa ukulungiswa kwe-36 bugs | Ubunlog
Ngaphantsi nje kwenyanga ephelileyo, uLuntu lwe KDE lukhutshiwe Izicelo ze-20.04.0 ze KDE. Njengohlobo lokuqala lwala manqaku, yeza neendaba ezibalaseleyo, uninzi lwazo kumhleli wevidiyo yaziswaUmzekelo, iscreen sokutshiza okanye iiprofayili ezintsha zokuhambisa. NgoLwesihlanu ophelileyo, kunye neseti yezicelo ukusuka ngoMeyi 2020, i-KDE iphehlelele Kdenlive 20.04.1, kodwa kwade kwaphela iiyure ezimbalwa eyadlulayo uyenze yaseburhulumenteni oku kuhla.
Lilonke, i-Kdenlive 20.04.1 iazise 36 utshintsho, 38 ukuba sidibanisa enye kwiWindows edibanise isiphumo sokuKhangela ukuKhangela kunye nesinye kuhlobo lweAppImage esimise ibhloko okanye "ukuphazamiseka" kwiinkqubo ezindala ngokuphelisa ukuxhomekeka kwe-OpenCV sse4. Apha ngezantsi unoluhlu lweendaba ezize nolu hlobo, uninzi lwazo lulungiso lwebug kunye nolunye uphuculo oluncinci.
1 I-Kdenlive 20.04.1 Iimbalasane
2 Ngoku iyafumaneka kwiLinux nakwiWindows
I-Kdenlive 20.04.1 Iimbalasane
Ukulandela umkhondo kwesindululo esihlanganiswe kuhlobo lweWindows.
Ukulungiswa kwengozi kwiinkqubo ezindala ngokususa ukuxhomekeka kwe-OpenCV sse4.
Amandla okukhubaza ukulayishwa kwe-.mlt uluhlu lokudlala kunye neprofayili engafaniyo neprofayili yeprojekthi.
Ukulungiswa kwengozi enokwenzeka ekudalweni kwezithonjana zekliphu.
Ukuqhekeka okungagungqiyo xa uzama ukuhambisa iklip yexesha elinexesha elithile xa ikliphu yebin ineziphumo ezithile.
Ukuphazamiseka okungaguqukiyo xa kusenziwa izahluko zeDVD.
Kulungiswe ngokungachanekanga iprofayili yoluhlu lokudlalayo, ebangela ukuphazamiseka xa ukhangela umgca wexesha
Umda wexesha elichanekileyo lokujonga kwangaphambili alisebenzi kumkhondo ofihliweyo
Iziqwengana zommeleli: ukubanakho ukulungisa iphrofayili yevaapi_h264 kwaye uqiniseke ngokugcina ucwangco lokusasaza
Ngoku sebenzisa iklasi ekhuselekileyo yeQSaveFile ukuqinisekisa ukuba uxwebhu lwethu alonakaliswanga kwidiski epheleleyo
Ngoku lungisa ukhetho lweerabha ngokuhamba ngokuskola.
Lungisa ukuhanjiswa komfanekiso (yongeza isimamva% 05d).
Umda wexesha elisisigxina uvavanyiwe ngokungalunganga.
I-MLT 6.20 ye-AVT ifomathiweyo yesilayidi engaziwa xa kuvulwa (Guqula ibe ngumfanekiso oqhelekileyo).
Izihloko zeetemplate ezisisigxina kwixesha lokusetha ixesha kwakhona kwiprojekthi iya kuvulwa kwakhona.
Iziqeshana ezinamathelisiweyo / ii-comps ngamanye amaxesha azisebenzi okanye zincamathele kumkhondo / isikhundla esingalunganga.
Lungisa izingoma ezaphukileyo kwifayile yomsindo
Lungisa ukutsala kweliso elophukileyo.
Lungisa "iprojekthi yogcino" ukudala kukho iifayile ezikhuselweyo zokugcina.
Isiphumo somkhondo esingaguqukiyo asitshintshi ixesha xa ubude beengoma butshintsha (ikliphu entsha yongezwa)
Ukulungiswa kwenziwa kwi-MLT git ukulungisa isandi ngaphandle kokuvumelanisa nefuthe lokutshintsha kwenqaku.
Isandi somsindo senziwe ngokungagqibekanga.
Ngoku yenza iikhomputha zisebenzise indawo ethe nkqo ethe tyaba, iyanda xa ikhethiwe.
Ukulungiswa kweendlela eziphambili zegama lejometri ekubekweni esweni.
Ukuphuculwa kokuphathwa kweziklip ezilahlekileyo, zoba isakhelo "sefoto" kwiziklip zemifanekiso.
Ukuphucula isaziso sokulahleka (iifayile ezisusiweyo) kwaye akuvumeli ukuphinda kulayishwe ikliphu elahlekileyo.
Ngoku uhlala uvumelanisa indawo yazo zonke iziphumo zamagama aphambili kunye nokuma komda wexesha.
Xa ususa ikliphu, ngoku jonga kwakhona ukuhambisa iziphawuli zeklip ukuze zilungelelanise.
Isusa bonke abamakishi abakhethiweyo kwidayalog yeepropathi zekliphu xa ucelwa.
Ukuphunyezwa kohlalutyo lwekhowudi yexesha xa uncamathisela isicatshulwa kumanqaku eprojekthi.
Shift + ukuwa kuya kuwa okanye kwandiswe zonke iithandi zomsindo okanye zevidiyo.
Ukusikwa kwesiqwengana, ngokuzenzekelayo kukhetha isahlulo esifanelekileyo sekliphu ukuba ibikhethwe ngaphambili.
Ukulungiswa kwamaxesha ngamanye amaxesha kungahambeli kwindawo yesikhombisi.
Ulungelelwaniso lomlinganiso olungasebenziyo kwimifanekiso yesihloko.
Titler: Khumbula ukubonisa imvelaphi.
Ukulungiswa kwe-bug ekukhetheni kwento yesikhongozeli, ebangela ukuba ezinye izinto zikhubazeke.
Ngoku ibonisa isantya sekliphu ngaphambi kwegama ukuze ibonakale xa utshintsha isantya sekliphu enegama elide.
Ayisasisebenzisi isakhelo sokulahla ikhowudi yexesha elinama-23.98.
Ngoku iyafumaneka kwiLinux nakwiWindows
Kdenlive 20.04.1 ngoku iyafumaneka kuzo zonke iinkqubo ezixhasiweyoEhambelana neLinux kunye neWindows. Singayisebenzisa ingxelo yayo kwi AppImage, kodwa neyakhe Inguqulelo yePlppak. Kwiiyure ezimbalwa ezizayo baya kuhlaziya inguqulelo ye-Snap (Sudo snap install kdenlive) kunye nohlobo lwe-KDE Backports repository.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » isiNxulumanisi » I-Kdenlive 20.04.1 ngoku ikhona ukulungisa ii-bugs ezingama-36 kunye nokuphucula inguqulelo yeWindows kunye neAppImage
I-Kid3 3.8.3 iza neempendulo ezimbini ezintsha, imowudi emnyama, iindlela ezimfutshane ezinqumlayo kunye nokunye okuninzi